ကုလ ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဘယ်သူဖြစ်လာနိုင်သလဲ
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနေရာကို စစ်ကောင်စီဘက်က ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားမူတွေရှိလာပြီး၊ လပိုင်းတွေအတွင်း ကုလအထွေထွေညီလာခံမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးရဖို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနေရာကို စစ်ကောင်စီဘက်က ပြန်ရဖို့ ကြိုးစားမူတွေရှိလာပြီး၊ လပိုင်းတွေအတွင်း ကုလအထွေထွေညီလာခံမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးရဖို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ လက်ရှိကုလသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖယ်ပြီး၊ အမေရိကန်ဆိုင်ရာမြန်မာစစ်သံမူးနဲ့ အစားထိုးဖို့၊ အခုလို ကြိုးပမ်းလာတာက၊ ရှေ.မှာ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာနိုင်ပါလဲ။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူ Christopher Gunness တို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။. ။ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း က စစ်ကောင်စီဖက်က ကြိုးစားလာပုံကို အခုလိုစရှင်းပြပါတယ်။
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလလောက်ကတည်းက စစ်ကောင်စီက ပို့တဲ့စာမှာတော့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်သူရိန် ပေါ့နော်။ သူရဲ စီဗွီ မှာတော့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မှာ လုပ်တယ်ဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပဲ။ စစ်ဖက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ၂ဝ၂၁ အထိ စစ်ဖက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အခု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ လာမယ် စက်တင်ဘာ ၇၆ကြိမ် မှာCredential Challenge ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ ဗြိတိန်အခြေစိုက် Myanmar Accountability Project မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမှုရှိရေး တာဝန်ခံ ခရစ်စတိုဗာဂန်းနက် ကလည်း ဒီကြိုးစာမှု အရေးပါမှုကို အခုလိုပြောပါတယ်။
ခရစ်စတိုဗာဂန်းနက် ။. ။ အရမ်းကို ရှင်းပါတယ်၊ စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂက ထိုင်ခုံနေရာကို အတင်း သိမ်းယူဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ ဒါကို၊ ကုလ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ စီစစ်အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ Credential Committee က အဆုံးအဖြတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ အဲ့ဒိတော့ ဆုံးဖြတ်နိုင်စရာ ၂ ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ နောက်မှဆုံးဖြတ်ဖို့ရွေ.ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ နောက်တခုကတော့ တစ်ဘက်ဘက်ကို အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်တာပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် အခုလက်ရှိ Credential Committee စိစစ်လက်ခံရေးကော်မီတီကိုလည်း ဦးကျော်မိုးထွန်း က .
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ Credential Committee စိစစ်လက်ခံရေးကော်မီတီမှာ အဖွဲ့ဝင် ၉ နိုင်ငံပါတယ်။ အဲဒီ ၉ နိုင်ငံမှာ ၃ နိုင်ငံကတော့ အမြဲတန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေကတော့ အမေရိကန် ၊ တရုတ် နဲ့ ရုရှားတို့ဖြစ်တယ်။ ကျန် ၆နိုင်ငံကတော့ အမြဲတန်းပြောင်းသွားပါတယ်။ Credential Committee စိစစ်လက်ခံရေးကော်မီတီ ကလည်း Report တင်ထားလို့ Review မလုပ်ဖူးလို့နားလည်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ကျနော်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီတော့ Credential Committee စိစစ်လက်ခံရေးကော်မီတီ က ရှေ့မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ခရစ်စတိုဘာဂန်းနက် က ..
ခရစ်စတိုဘာဂန်းနက် ။. ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေ အနိုင်မရဖို့ များပါတယ်။ ဒီ စီစစ်အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီအနေနဲ့ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကို ကုလထိုင်ခုံနေရာပေးလိုက်ဖို့က ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်းဆုံးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဓိကက၊ အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိထားလို့ပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေတုံးက ဟေတီ နဲ့ Sierra Leone နိုင်ငံတွေမှာ အာဏာသိမ်းခဲ့စဉ်တုံးက၊ အခုလို ကုလထိုင်ခုံနေရာပါ သိမ်းယူလိုသူတွေကို၊ ဒီကော်မတီက အသိအမှတ်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် ရှေ့ဖြစ်မယ် အခြေအနေကိုလည်း ဦးကျော်မိုးထွန်း က..
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ အထွေထွေညီလာခံမတိုင်မီမှာ ကို စည်းရုံးရပါတယ်။ ၃ နိုင်ငံက ရှိနေမယ်။ ၆ နိုင်ငံက အသစ်တွေပေါ့။ ဘယ်သူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် လက်လှမ်းမီသမျှစလုပ်နေတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်ဆိုရင်လည်း သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီး လုပ်တာအများကြီးရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ရှေ့မှာဖြစ်လာနိုင်တာကိုလည်း ခရစ်စတိုဗာဂန်းနက် က...
ခရစ်စတိုဘာဂန်းနက် ။. ။ လက်ရှိဖြစ်ဖို့ အတော်များနေပုံရတာကတော့၊ အခုမဆုံးဖြတ်ဘဲ နောက်ကိုရွေ.လိုက်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စက အရမ်းကို သိသာထင်ရှားလွန်းနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အကြီးအကျယ် ရှုံးခဲ့သူတစ်စုက၊ သူ့ပြည်သူကို သေနပ်ပြန်ထောက်ပြီး ထအာဏာသိမ်းတယ်၊ ကုလလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ပြောသလို အကြောက်တရားနဲ့ အခုလွှမ်းမိုးထားတာကို၊ ကုလသမဂ္ဂလိုစင်မြင့်က လူတွေက သွားထောက်ခံပေးလို့ရမှာလဲ။ နောက် အထူးသဖြင့်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တုံးက ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်စုံစမ်းရေးမစ်ရှင်ကနေ၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မူတွေ၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်မူတွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်မူတွေနဲ့ စွဲချက်တင်ဖို့ပြောထားတဲ့သူတွေကို၊ အသိအမှတ်ပြုပေးဖိုဆိုတော့လေ၊ ခက်လွန်းပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ ဦးကျော်မိုးထွန်း ကလည်း ရှေ့ဆက်ကြိုးစားရမယ့်အနေအထားကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။
အမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ။. ။ ကုလထိုင်ခုံကို ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သူက ယူထားနိုင်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကော အားလုံးကို ဝိုင်းဝန်ကြိုးစားဖို့လိုပါမယ်။ ဒီ နယူးယောက်မှာတင်မက သက်ဆိုင်ရာ မြို့တော်တွေမှာ စည်းရုံးဖို့လိုပါမယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ ခရစ်စတိုဗာဂန်နက် ကတော့ စစ်ကောင်စီဖက်က ရဖို့ခက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း က စစ်ကောင်စီ ကို ဆန့်ကျင်ကတည်း က စစ်ကောင်စိအတွက် ကျဆုံးမှုဖြစ်သလို အခုလာမယ် အသိမှတ်ပြုပွဲကလည်း နောက်ထပ် သံတမန်ရေးအရ ကျဆုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီးနရောကို စဈကောငျစီဘကျက ပွနျရဖို့ ကွိုးစားမူတှရှေိလာပွီး၊ လပိုငျးတှအေတှငျး ကုလအထှထှေညေီလာခံမှာ အဆုံးအဖွတျပေးရဖို့ မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
စဈအာဏာသိမျးတာကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ လကျရှိကုလသံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျးကိုဖယျပွီး၊ အမရေိကနျဆိုငျရာမွနျမာစဈသံမူးနဲ့ အစားထိုးဖို့၊ အခုလို ကွိုးပမျးလာတာက၊ ရှေ.မှာ ဘယျလို ဆကျဖွဈလာနိုငျပါလဲ။
ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျးနဲ့ ဗွိတိနျအခွစေိုကျ မွနျမာ့အရေးသုံးသပျသူ Christopher Gunness တို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။. ။ သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး က စဈကောငျစီဖကျက ကွိုးစားလာပုံကို အခုလိုစရှငျးပွပါတယျ။
သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ ပွီးခဲ့တဲ့ မလေလောကျကတညျးက စဈကောငျစီက ပို့တဲ့စာမှာတော့ ဝါရှငျတနျဒီစီမှာရှိတဲ့ ဗိုလျမှူးကွီး အောငျသူရိနျ ပေါ့နျော။ သူရဲ စီဗှီ မှာတော့ ဝါရှငျတနျဒီစီ မှာ လုပျတယျဖျောပွထားတာမဟုတျပဲ။ စဈဖကျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တယျ။ ၂ဝ၂၁ အထိ စဈဖကျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျရငျး အခု နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေယျဆိုတာဖျောပွထားပါတယျ။ လာမယျ စကျတငျဘာ ၇၆ကွိမျ မှာCredential Challenge ယူဆပါတယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ ဗွိတိနျအခွစေိုကျ Myanmar Accountability Project မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တာဝနျခံမှုရှိရေး တာဝနျခံ ခရဈစတိုဗာဂနျးနကျ ကလညျး ဒီကွိုးစာမှု အရေးပါမှုကို အခုလိုပွောပါတယျ။
ခရဈစတိုဗာဂနျးနကျ ။. ။ အရမျးကို ရှငျးပါတယျ၊ စဈအုပျစုအနနေဲ့ ကုလသမဂ်ဂက ထိုငျခုံနရောကို အတငျး သိမျးယူဖို့ ကွိုးစားတာပါပဲ။ ဒါကို၊ ကုလ အထှထှေညေီလာခံရဲ့ စီစဈအသိအမှတျပွုရေးကျောမတီ Credential Committee က အဆုံးအဖွတျပေးရမှာပေါ့နျော။ အဲ့ဒိတော့ ဆုံးဖွတျနိုငျစရာ ၂ ခုရှိပါတယျ။ တဈခုကတော့ နောကျမှဆုံးဖွတျဖို့ရှေ.ဆိုငျးလိုကျတာပါ။ နောကျတခုကတော့ တဈဘကျဘကျကို အသိအမှတျပွုပေးလိုကျတာပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ အခုလကျရှိ Credential Committee စိစဈလကျခံရေးကျောမီတီကိုလညျး ဦးကြျောမိုးထှနျး က .
သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ Credential Committee စိစဈလကျခံရေးကျောမီတီမှာ အဖှဲ့ဝငျ ၉ နိုငျငံပါတယျ။ အဲဒီ ၉ နိုငျငံမှာ ၃ နိုငျငံကတော့ အမွဲတနျးအဖှဲ့ဝငျဖွဈနတေယျ။ အဲဒီနိုငျငံတှကေတော့ အမရေိကနျ ၊ တရုတျ နဲ့ ရုရှားတို့ဖွဈတယျ။ ကနျြ ၆နိုငျငံကတော့ အမွဲတနျးပွောငျးသှားပါတယျ။ Credential Committee စိစဈလကျခံရေးကျောမီတီ ကလညျး Report တငျထားလို့ Review မလုပျဖူးလို့နားလညျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ ကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ ကနြျောဆကျရှိနမေယျလို့ ယူဆပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ Credential Committee စိစဈလကျခံရေးကျောမီတီ က ရှမှေ့ာ ဘယျလိုဆုံးဖွတျခကျြခပြေးနိုငျမလဲဆိုတာ ခရဈစတိုဘာဂနျးနကျ က ..
ခရဈစတိုဘာဂနျးနကျ ။. ။ အခွခေံအားဖွငျ့တော့ အာဏာသိမျးခေါငျးဆောငျတှေ အနိုငျမရဖို့ မြားပါတယျ။ ဒီ စီစဈအသိအမှတျပွုရေးကျောမတီအနနေဲ့ အာဏာသိမျးခေါငျးဆောငျတှကေို ကုလထိုငျခုံနရောပေးလိုကျဖို့က ဖွဈနိုငျခြေ အနညျးဆုံးပါ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဓိကက၊ အရငျဖွဈခဲ့တဲ့ သာဓကတှရှေိထားလို့ပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှဈတှတေုံးက ဟတေီ နဲ့ Sierra Leone နိုငျငံတှမှော အာဏာသိမျးခဲ့စဉျတုံးက၊ အခုလို ကုလထိုငျခုံနရောပါ သိမျးယူလိုသူတှကေို၊ ဒီကျောမတီက အသိအမှတျပွုမပေးခဲ့ပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ ရှဖွေ့ဈမယျ အခွအေနကေိုလညျး ဦးကြျောမိုးထှနျး က..
သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ အထှထှေညေီလာခံမတိုငျမီမှာ ကို စညျးရုံးရပါတယျ။ ၃ နိုငျငံက ရှိနမေယျ။ ၆ နိုငျငံက အသဈတှပေေါ့။ ဘယျသူတှဖွေဈလာမယျဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ ဘယျလိုဖွဈဖွဈ လကျလှမျးမီသမြှစလုပျနတေယျ။ ဥပမာ အမရေိကနျဆိုရငျလညျး သူတို့နဲ့ဆှေးနှေးပွီး လုပျတာအမြားကွီးရှိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ရှမှေ့ာဖွဈလာနိုငျတာကိုလညျး ခရဈစတိုဗာဂနျးနကျ က...
ခရဈစတိုဘာဂနျးနကျ ။. ။ လကျရှိဖွဈဖို့ အတျောမြားနပေုံရတာကတော့၊ အခုမဆုံးဖွတျဘဲ နောကျကိုရှေ.လိုကျဖို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ၊ ဒီကိစ်စက အရမျးကို သိသာထငျရှားလှနျးနပေါတယျ။ ဒီမိုကရစေီနညျးကလြုပျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ အကွီးအကယျြ ရှုံးခဲ့သူတဈစုက၊ သူ့ပွညျသူကို သနေပျပွနျထောကျပွီး ထအာဏာသိမျးတယျ၊ ကုလလူ့အခှငျ့အရေးကိုယျစားလှယျပွောသလို အကွောကျတရားနဲ့ အခုလှမျးမိုးထားတာကို၊ ကုလသမဂ်ဂလိုစငျမွငျ့က လူတှကေ သှားထောကျခံပေးလို့ရမှာလဲ။ နောကျ အထူးသဖွငျ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈတုံးက ကုလသမဂ်ဂအခကျြအလကျစုံစမျးရေးမဈရှငျကနေ၊ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမူတှေ၊ လူသားမြိုးနှယျအပျေါကြူးလှနျမူတှေ၊ စဈရာဇဝတျမူတှနေဲ့ စှဲခကျြတငျဖို့ပွောထားတဲ့သူတှကေို၊ အသိအမှတျပွုပေးဖိုဆိုတော့လေ၊ ခကျလှနျးပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ ဦးကြျောမိုးထှနျး ကလညျး ရှဆေ့ကျကွိုးစားရမယျ့အနအေထားကို အခုလိုပွောပွပါတယျ။
အမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး ။. ။ ကုလထိုငျခုံကို ကနြျောတို့နိုငျငံနဲ့ ပွညျသူကို ကိုယျစားပွုနိုငျသူက ယူထားနိုငျတာက အကောငျးဆုံးဖွဈပါမယျ။ ဒီအတှကျ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှကေော အားလုံးကို ဝိုငျးဝနျကွိုးစားဖို့လိုပါမယျ။ ဒီ နယူးယောကျမှာတငျမက သကျဆိုငျရာ မွို့တျောတှမှော စညျးရုံးဖို့လိုပါမယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ ခရဈစတိုဗာဂနျနကျ ကတော့ စဈကောငျစီဖကျက ရဖို့ခကျမယျလို့ပွောပါတယျ။
တကယျတော့ သံအမတျကွီး ဦးကြျောမိုးထှနျး က စဈကောငျစီ ကို ဆနျ့ကငျြကတညျး က စဈကောငျစိအတှကျ ကဆြုံးမှုဖွဈသလို အခုလာမယျ အသိမှတျပွုပှဲကလညျး နောကျထပျ သံတမနျရေးအရ ကဆြုံးမှုဖွဈတယျလို့ လလေ့ာသူတှကေ ဆိုနကွေပါတယျခငျဗြာ။